Etu esi etinye ma hazie XAMPP na GNU / Linux | Site na Linux
Etu esi etinye ma hazie XAMPP na GNU / Linux
Nexcoyotl | | Aplicaciones, GNU / Linux, Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
Nke a bụ usoro ndu ugbu a ka esi etinye ma hazie XAMPP na GNU / Linux, site na iji usoro zuru ezu.
1 Gịnị bụ XAMPP?
2 Etu esi etinye ma hazie XAMPP?
2.1 Installwụnye Xampp
2.2 Tọ ntọala XAMPP
Gịnị bụ XAMPP?
XAMPP bụ n'efu ma dịkwa mfe ịwụnye nkesa Apache nwere MariaDB, PHP, na Perl. Emebere ngwugwu XAMPP ka ọ di mfe ịwụnye ma jiri ya wụnye nnweta Apache nwere MariaDB, PHP na Perl.
Etu esi etinye ma hazie XAMPP?
1.- Budata XAMPP maka Linux https://www.apachefriends.org/es/index.html
2.- Na njedebe nke nbudata anyị nwere Archive.na-agba ọsọ, nke anyị ga-etinyere n'ụzọ dị otú a:
Anyị na-emeghe ọnụ Njikwa + T, ma ọ bụ site na menu anyị.
Anyị na-abanye dị ka mgbọrọgwụ:
Anyị na-aga n'ihu inye ikikere mmebi iwu maka .run na ịwụnye XAMPP
Anyị na-anabata ihe niile ma chere ka nwụnye rụchaa.
Tọ ntọala XAMPP
3.- Anyị na-aga n'ihu ịhazi XAMPP
Nhazi MySQL (MariaDB)
$ ln -s / opt / lampp / bin / mysql / usr / bin / $ nke mysql $ type mysql $ ls -lart / usr / bin / mysql
Tọ iwu com.ubuntu.pkexec.xampp.policy maka ihe ngosi ihe osise na-agba ọsọ na ikikere nchịkwa nke a ga-emepụta faịlụ bash na-agba ọsọ xampp-linux-x64-5.6.28-0-installer.run. Maka nke a, anyị na-aga n'okporo ụzọ / usr / share / polkit-1 / omume na anyị na-ekpe:
$ metụ com.ubuntu.pkexec.xampp.policy $ nano com.ubuntu.pkexec.xampp.policy
N'ime faịlụ ahụ com.ubuntu.pkexec.xampp.policy anyịadochie koodu ndị a:
A choro nyocha iji mee Ogwe njikwa XAMP mmmmmmmmmm auth_admin auth_admin auth_admin /opt/lampp/manager-linux-x1.0.run eziokwu
Mepụta edemede maka imebi XAMPP graphical panel na ụzọ / usr / bin / . Anyị ga-emepụta aha na aha xampp-njikwa-obubọk:
metụ xampp-control-panel nano xampp-control-panel
Tọ ntọala .desktop iji malite XAMPP onye njikwa ọrụ, na-agba iwu ndị a, n'okporo ụzọ / usr / òkè / ngwa:
Mgbe na-agba ọsọ nano application.desktop tinye ndị na-esonụ koodu
[Ntinye akwụkwọ na Desktọpụ] Ikwu = Malite / Kwụsị Aha XAMPP Aha = Ogwe njikwa XAMPP Exec = xampp-control-panel Icon = xampp Encoding = UTF-8 Terminal = ụgha Type = Ngwa
Ugbu a, anyị nwere akara ngosi na mgbe a ga-eme ya pkexec, nke na-ajụ anyị maka nbanye ka ekenye ikikere ogbugbu na ogwe ihe osise XAMPP. Ọ kwesịrị ịdị ka nke a:
Iji jiri mysql, ọ bụrụ n ’ị mere nhazi gara aga ị gaghịzịkwa mkpa ịga na ndekọ aha ha / opt / lampp / bin / mysql -u mgbọrọgwụ -p ịbanye ugbu a ị ga-emepe ọnụ na-agba ọsọ mysql -u root -p.
Ugbu a, anyị nwere ike iji eserese jikwaa XAMPP anyị ma nweta mysql na-ejighi na-aga na / opt / lampp / bin directory.
Nke a bụ nduzi niile, enwere m olileanya na ị masịrị ya ma echefula ịhapụ ihe ị kwuru.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Etu esi etinye ma hazie XAMPP na GNU / Linux
Ndị a bụ isiokwu ndị a kacha nwee ekele maka maka ọdịnaya zuru ezu na nke ziri ezi nke ọdịnaya ha. O nyeere ndị ọrụ ibe ya aka ịhọrọ Windows wụnye nsụgharị nke ngwanrọ XAMPP. Amaghị m na ịdị adị nke installer maka Linux, ejiri wụnye na ịhazi LAMP na aka. Ekwenyesiri m ike na ọ ga-abụ nnukwu enyemaka maka ndị chọrọ ịnweta ihe nkesa na njirimara ndị a, ma kwenye na ọtụtụ ndị mmemme na ndị nchịkwa na-ahọrọ ịwụnye ya na Windows, ime ya na sava na Linux. Daalụ Nexcoyotl maka ụdị ọmarịcha isiokwu a!
I meela nke ukwuu, Federico, a na-ekele okwu gị, enwere m olileanya na obere akwụkwọ ntuziaka a dị mfe ma baa uru. Nke a bụ nke mbụ m nwere olile anya ịme ọtụtụ ndị ọzọ.
Mana enwerem ajuju, kedu ihe imetu aka? Aghọtara m na ọ bụ iji mepụta faịlụ oghere, mana naanị nano, ị nwere ike ịmepụta ma dezie faịlụ ahụ ...
emetụ bụ iwu ejiri iji melite ụbọchị nnweta na mgbanwe nke otu faịlụ ma ọ bụ karịa na nke ugbu a.
metụ [OPTINO]… FILE…
Ọ bụrụ na esemokwu ahụ FILE ma ọ bụ aha faịlụ adịghị, yabụ a na-emepụta faịlị efu nke otu aha dị ka FILE.
Ọ bụ ihe ziri ezi - ma bụrụkarị - ụzọ a iji mepụta faịlụ efu, karịa site na nchịkọta akụkọ nano
Na-agba ọsọ nwoke aka maka ozi ndi ozo.
Ndewo yerko n'ọdịnihu ekele maka ịza ajụjụ, ihe mere m ji eji aka bụ n'ihi na maka m ọ bụ omenala hehe. Ma ọ bụrụ na, dị ka comrade Federico kwuru, ọrụ ya karịrị ihe e kere eke nke faịlụ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmatakwu, bido $ man touch, ekele enyi.
Ma, mgbe aka ị na-agbanwe faịlụ ahụ, yabụ ọ bụ usoro ọzọ maka ihe ị na-eme.
Amaara m ihe mmetụ ahụ na-eme, achọrọ m ịma ihe kpatara i ji mee ya: P, ebe ọ bụ na nano ọ karịrị ihe enough
Ezigbo akwụkwọ, ezigbo ọrụ.
Kedu ihe ị jiri hazie ozugbo, enwere m mmasị na nhazi ya.
Ndewo enyi ekele maka ịkwụsị site na ịza ajụjụ 😀, M na-eji powerline shei ọ bụ ihe na-emeghe-isi iyi oru ngo ị pụrụ ịchọta ya na github. Ọ dị mfe ịhazi m na-eji bash na shei ike, ọ bụ ezie na ị nwekwara ike hazie ya maka zsh.
Ezigbo nkuzi. Ihe nhazi nke ọnụahịa ahụ na-adọrọ uche m, ị nwere ike ịkekọrịta nhazi ahụ?
Ndewo Koratsuki, lelee nkuzi a nke m na-eme, enwere m olileanya na ọ ga-aba uru maka gị ịhazi ngwa ngwa ahụ. https://blog.desdelinux.net/configurar-bash-prompt-powerline-shell-master/
Ezigbo mma onyinye gị Nwanna, ọ dị mwute na anaghị m ahụ akwụkwọ a, izu ole na ole gara aga ha hapụrụ m ọrụ nke ịwụnye gburugburu LAMP na kọmputa m, mana site na ihe m hụrụ ọ dị mfe ịwụnye XAMPP. Agbanyeghi ekele maka onyinye gị, ekele gị.
Ogboko 08 dijo
Akwa, a kọwara nke ọma yana n'ụzọ dị mfe.
Zaghachi na daz08
Ihe niile gara nke ọma.
Ndewo, ihe niile akọwara n’ihe onyonyo, a kọwakwara ya n’ederede? Nke ahụ bụ, ihe onyogho ndị ahụ bụ maka naanị ebumnuche. Ma ọ bụ enwere usoro ị ga - eme nke nọ na foto. A na m ajuju maka na m kpuru isi, ma adighi m aka na Linux ma, a choghi m ime mashi haha. N'aka nke ọzọ, enwere m onye òtù ọlụlụ ubuntu 18. Enwere ike itinye nkuzi a n'ọrụ? Site ugbua na-ekele gị nke ukwuu. Cheers!
Ihe magburu onwe ya na ọdịnaya ihe atụ, nke a na-eme ka ọ dị mfe iduzi ndị ọzọ
Zaghachi Leon S
- otu akụkụ gosipụtara ugboro abụọ
nano xampp-njikwa akara
- otu na ụzọ
- na onye ọzọ na ụzọ:
/ usr / òkè / ngwa
- Echere m n’ezie n’ụzọ nke abụọ a ọ kwesịrị xampp-control-panel.desktop.
- N'aka nke ọzọ, ime ọtụtụ n'ime usoro ndị m na-enweghị ikikere ka m wee gafere iwu ndị ahụ na «sudo«, ka m nwee ike mepụta ha.
- Ma n’ikpeazụ mgbe m nwetara akara ngosi ọ na-enye m ozi ezighi ezi:
Enweghi ike ime iwu "xampp-control-panel".
Okpu usoro umuaka apughi ime "xampp-control-panel"
- Emeworị m ya ka ọ rụọ ọrụ ma etinyela m ikike igbu ya na faịlụ / usr / bin / xampp-control-panel.
sudo chmod + x / usr / biini / xampp-njikwa-obubọk
Daalụ na nke a bụ ihe m na-efu maka ikike agọnahụ nsogbu.
Zaghachi Harold Barboza
2020 post a ka na-arụ ọrụ dị ukwuu!
Daalụ, ọ rụụrụ m ọrụ, agbanyeghị na anaghị m ahụ akara ngosi xampp mana igbe ọcha mana ọ baghị uru, enwere m nsogbu na mgbe m jiri nchịkọta akụkọ dịka Sublime ọ na-agọnahụ m ikikere iji mepụta faịlụ na htdocs oru. M jisiri ike mee magburu onwe ya site n'inye ikikere m nwere ike ịgụ ma dezie faịlụ ahụ mana enweghị m ike ịme ya ịmepụta faịlụ ọhụụ.
Nde kwuru Nexcoyotl maka edemede !!!, na ndị niile na - eme blog.desdelinux.net ebe ị ga - achọta ozi anyị chọrọ !!.
Daalụ daalụ !!
M na-eji Linux mint ma enwere m ike iji otu akọwapụtara na accesses ebe m na-eme usoro ahụ ma ha apụtaghị na akụkụ ọ bụla
Tupu anyị emeela nke ukwuu
Otu esi emepụta sava weebụ dị mfe na ahịrị 5 nke bash
Ndị mmeri nke mbipụta 8th nke 2016 PortalProgramas Awards